Warbixin: DF oo shaacisay xiliga la bixinayo shatiga balookyada iyo guddiga kheyraadka oo ka hor yimid |
Warbixin: DF oo shaacisay xiliga la bixinayo shatiga balookyada iyo guddiga kheyraadka oo ka hor yimid
Muqdisho-Dowladda Soomaaliya ayaa xalay si rasmi ah ugu dhowaaqday waqtiga la bilaabayo tartanka bixinta shatiga balookyada saliidda laga baarayo ee Soomaaliya.
Wasiirka wasaaradda Macdanta iyo Batroolka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in 4-ta bisha 8-aad ee sanadkan la bilaabayo tartanka shirkadaha u hanqal taagaya fursadaas, isla markaana lasoo gaba-gabeyn doono bisha Maarso ee sanadka 2021-ka.
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in tartankaas lagu soo bandhigi doono illaa toddoba Balook oo ay horay u baartay dowladda Soomaaliya sanadihii 2014-kii illaa 2015-kii.
Qaar kamid ah maamul goboleedyada iyo inta badan xisbiyada siyaasadda Soomaaliya ayaa kasoo hor jeestay meel marintii sharciga batroolka Soomaaliya, kaas oo ay ku tilmaameen sharci aan lagu heshiin dal-daloolo badana ay ka muuqdaan.
Hase yeeshee Wasiirka Batroolka Soomaliya Cabdirashiid ayaa sheegay in sharcigaan oo uu horay saxiixay madaxweynihii dowladii ku meel gaarka aheyd Cabdullahi Yuusuf, ay dib u habeyn ku sameeyeen maadaama markaas kadib uu dalku qaatay nidaamka federaalka.
Shir ka dhacay 5-tii Juun 2018-kii magaalada Baydhabo ayuu sheegay wasiirku in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ay heshiis uga gaareen sida loo qeyb sanayo kheyraadka dalka iyo cidda maamuleysa.
Dhinaca kale durbadiiba waxaa arintan kasoo hor jeestay guddiga kheyraadka golaha aqalka sare ee baarlamanka Soomaaliya.
Guddoomiyaha guddiga kheyraadka golaha aqalka sare ahna Xoghayaha arrimaha dibadda Xisbiga Himilo Qaran Senator Ilyaas Ali Hassan ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu uga soo horjeestay qorshaha dowladda Soomaaliya ee ku aaddan iibka qandaraasyada 7 baloog oo ku kla yaalla Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
Qoraal uu Senatorku soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku yiri, “Iib-geynta Shidaalka Somalia xiligaan oo uu aduunku maraayo qiimihiisa meeshii ugu xumeed oo ah yaa iga qaata iyo aduunyada oo la daalaa dhaceyso dhibatada Coronavirus ka waxay tusaale utahay qorshe xumada iyo kala sareysiinta muhiimadaha dalka xiligaan adag.”
Warbixintan waxaa nooga diyaariyey Weriyaha Idaacadda Kulmiye Liibaan Nuur Lugcad.